[Talo] Ku Habee GRUB2 gudaha ArchLinux | Laga soo bilaabo Linux
Isbarbardhig ayaa i weydiistay inaan sharxo sida loogu qaabeeyo GRUB archlinux markaa halkan ayaan ku dhaafayaa:
1.- Soo hel mawduuc aan jecel nahay
Ama sameyso taada haddii aad waqti dheeraad ah haysato waxaan soo qaadan doonaa tusaalaha Archxion. Archxion waxay ku jirtaa yaourt waad ku rakibi kartaa
yaourt -S grub2-mawduuca-archxion
ama ka soo dejiso Git oo nuqul galka
# mv -Rv ~ / Archxion / boot / grub / mawduucyada
2.- Tafatir / etc / default / grub
# vim / iwm / default / grub
Waxaan raadineynaa qaybta
[...] # GRUB_THEME = "waddo / illaa / gfx / mawduuc" [...]
Qadka waa laga faalloodaa, waxaan kaxirnaa khadka oo waxaan kudarnaa wadada mowduuca
iyo tan iyo markaan ku dhex soconno qaybahaas waxaan yareyn karnaa waqtiga sugitaanka ee GRUB
Waxaan badbaadinaynaa isbeddelada
3.- Abuur grub.cfg cusub
Waxaan dib u bilaabi doonaa oo hada diyaar ayaan nahay GRUB2 wuxuu yeelan doonaa mawduuc wanaagsan
Maqaalkan ayaa lagu qoray golahayaga by wada4Kaliya waxaan halkaan ku keenayaa waxoogaa yar oo tafatir ah qoraalka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » [Tilmaan] Ku habayn GRUB2 gudaha ArchLinux
Wanaagsan, aad u xun uma isticmaalo Arch 😀
Iyo u habeynta qadarka Debian waxay raacaysaa isla qaabkii? Mise waa suurtagal oo keliya nooca ArchLinux?
Runta ayaa ah in natiijada ay tahay mid cajiiba. Waxaa loo adeegsaday asalka Debian grub iyo / ama LMDE XD
haa waa inay ahaataa isku mid
Waxaan jeclaan lahaa inaan raaxo ku dhammeeyo qurxinta debiankeyga mowduuc la mid ah kan aad ka muujisay qaansoleyda.
Delujo ,, laakiin waxba ugama badalo syslinux-kayga wax uun
Waad ku mahadsantahay wadaagista.
Waxay ku shaqeysaa kumbuyuutarkeyga kumbuyuutarka oo leh shaashadda Intel, halka laptop-kayga uusan la shaqeyneyn wadayaasha nvidia Waxay ku siinaysaa garaaf aan la helin qalad.
Weli waxaan u baahanahay inaan isku dayo wadayaasha noveau, laakiin waxaan ahay caajis inaan mar kale tirtiro oo aan rakibi ejjeje.
Waxaan kaliya rabay inaan ka faaloodo faahfaahintaas.
Waa inaad hagaajisaa qaraarka ay kugula talinayaan inuu noqdo kan soo socda GRUB_GFXMODE = 1024 × 768 Waxaan rajeynayaa inuu kuu shaqeynayo 😀
Ku jawaab daecko
qaraar sare ayaa loo isticmaali karaa, waxay kuxirantahay kaarka fiidiyowga iyo kormeeraha.
Khaladku waa marka uu kor ugu kaco desktop-ka, boot, waxay u egtahay mid hagaagsan.
Waqti badan ayey qaadatay illaa iyo markii aan wax ka beddelay burka .. Runta ayaa ah inay umuuqato mid aad u wanaagsan 😀 ... Waxaan ku tijaabiyey wadayaasha Nvidia wax dhibaato ahna ma jirin ..
Waa wax laga xishoodo inay kugula taliyaan 4: 3 xallinta mawduucaas, laakiin haddii kale waxay umuuqataa mid quruxsan, waad ku mahadsan tahay caaradda, gaar ahaan maxaa yeelay weligey kumaan mashquulin inaan rakibo mawduuc loogu talagalay murugada! 🙂
Oobow! waxaa lagu tijaabiyay linuxMint 16, oo leh Archxion xalka lagu taliyay 1024x768 iyo waxba. Ma lihi darawallada xaasidnimada leh ee la rakibo, waxaan hubaa inaan la jiito linuxmint hooyo (noveau) laakiin ma ogi inay sabab u tahay tan. Waan aqbalayaa talooyinka. Midka albaabka laga galona waa tabaruc aad u wanaagsan.
Ku jawaab pansxo
isticmaal xulashada "auto"
saaxiibo wanaagsan, aakhirkii waxaan xal u helay dhibaatadayda, waana ka faalloodaa haddii ay dhacdo inay qof caawiso.
-in nidaamka boot-ka ee mashiinkeyga riix furihii «c» si aad u gasho qalabka #grub>
- Mar konsol-ka waxaad ku qori doontaa «vbeinfo» go'aammada aynnu aqbalnayna way soo muuqanayaan
-Mine kiiskan wuxuu ahaa: 1024x768x32 oo aan aheyn 1024x768
-Hadda waxaan kaliya oo aan ku qasbaynaa inaanu qaabeyno faylka «/ etc / default / grub» ee khadka
-Waan kaydinaa faylka
-Waxaan ku badbaadineynaa isbeddelada:
grub -mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
-oo diyaar ah
Waxaan rajeynayaa inay ku caawin doonto. salaan dhamaan.
Tilmaam aad u fiican, ma ogtahay mawduuc kale oo loogu talagalay grub2?
Waxay umuuqataa mid weyn; hadduusan ahaan lahayn sida ay u foolxun tahay qaabkaaga (guud ahaan GRUB2), waan isticmaali lahaa… Xilligan la joogo waxaan ahay qof isticmaala Syslinux oo faraxsan.
Oo miyaad haysaa waxaas oo dhan? oO
Changos, qof ayaa i caawin kara, waxaan isticmaalaa Mnajaro waxaanan u maleynayay inaan sidaas oo kale sameyn karo, laakiin waxaan helayaa waxyaabaha soo socda:
mv -r ~ / Archxion / boot / grub / mawduucyada
mv: ikhtiyaar aan ansax ahayn - 'r'
Isku day 'mv –help' wixii macluumaad dheeraad ah.
Waxaan durba indha indheeyay gargaarka oo ma aanan arkin dookh "-r"
pansxo gudaha dijo
iskuday inaad isticmaasho raasamaal "mv -R", ama halkii aad ka goyn lahayd ama aad guuri lahayd, ku nuqul galka Archxion meesha aad u socoto, asal ahaan waa isku mid.
Jawaab pansxo, en
Sax waa raasumaal -R qalad ayeey kuleeyihiin meesha.
Faallo in mawduuca aad rakibtay loo yaqaan Dharma.
Waa wax aad u qabow, mahadsanid.
Waan ka xumahay dhibaatadan waxay ku cusub tahay tii hore, waxaad heli doontaa casharro aad ku bilaabi karto qaab muuqaal ah heh, baaritaan ku samee playmouth laakiin ma aqaan sida loo dalbado. Waad ku mahadsantahay horay.
U jawaab obadiah
Barry iyo LinBerry si ay u maareeyaan BlackBerry